Faysal Ma Mucaarid Baa Mise Waa Muxaafid ( Abdi-Shotaly)?
(Hadhwanaagnews) Sunday, February 10, 2019 07:55:50
Waxa makhruuqa la yidhaahaa, waa cudur dadka kaga beerma Maskaxdda, oo ku abuura qof kale wax uu haysto ama hibo isaga
Horta aan idiin qadimee su'aalo hor dhac ahe, Faysal Zaad siyaasi baan ahay ma ka dhabaa? mise waa iska yeel-yeel? Ma waxa uu hoos yimaadaa, kuna shaqaysta Askarta Kulmiye oo ma madax banaana? Waxana lagu masruufaa oo keliya, waxad ka hawl gashaa oo qudha, kala jebinta beesha aad ka soo jeedo? Ma inoo sheegi karaa waxa uu Xusbi uu mucaarid ku noqdo ama Muxaafid? Ku soo noqo cinwaanka sare ku yaal iyo waxa uu inoo qeexaayo. Waxa makhruuqa la yidhaahaa, waa cudur dadka kaga beerma Maskaxdda, oo ku abuura qof kale wax uu haysto ama hibo isaga ka maqan, oo mid kale uu ku arko, taas oo uu
u diidan yahay, jeclays-tana in uu isagu lahaado, oo uu muraara-dilaaco ka qaado, muxuu hebel ama hebaalyo ay waxa aad wayday u heleen. Dabeed wuxu ku kacaa wax-yaabo qayrul-macquul ah, oo ay ka mid yihiin xumaan joogto ah, af-lagaado iyo cay, isaga oo bilaa sabab dhakadda uun uga fuula, mar-marna waxa ku soo cabeeya qof kale oo ay kala mabdda yihiin, oo arimo gaar ahi ay ka dhexeeyaan, sidda siyaasadda, baayac-mushtar ay ku tartama-yaan, hebel muxuu hantidaa ku helay iyo wax-yaabo la mid ah oo fara badan. Wuxu isku dayaa in uu is yidhaaho suuqa ka saar, calaashaan wax aan wayey buu isagu haystaa, waayo waxa ka maqan, haduu iska dhaafi lahaa, in uu kaba faa'iidi lahaa, dad-kuna aanay yidhaaheen maxaa qofkan hebel ama heblaayo daba dhigay, muu danihiisa ku foofo,
Hinaasuhu ama makhruuqu, waa xauun gala dadka qaar sidda Faysal Zaad, oo la daba dhigay Xusbiga Waddani iyo C/rahman Cirro, kaas oo siddii tusbax uu ku werdiyaayo, af-kuun ku haya hebel, malaha Cibaadaddii ilaahay buu sidaas mooday, in wax ka sheegiisa uu janadda ku tegaayo'e, oo xumaan uu marmamariyo iyo been maskax-diisu ku mashquusho, bay ilayn noqotay subxaana-laahidii uu akhriyi lahaaye. Haduu risuqu meel xun kaa galo, waa balaayo aan maaro lahayn. Faysal Zaad iyo Ururka uu tuurta ku sitaa, waxa akhristaw iskaga khaldan, oo si xun iskaga dhex galay, kalana saari la'yahiin, ilaa hada oo uu mar afraadkii rabo in uu isi soo sharaxo, ahna waxa halkaa dhigay ee uu la dirgan waayey, aan idiin sheego'e waxa weeye:-
(a) Faysal Zaad, waxa aanu garanayn, oo aanu fahansa-nayn una jeedin, in uu ogaado waxa uu rabaa waxay yihiin, ee waa in uu is waydiiyaa su'aalahan soo socdda, kuwaas oo ay ka mid yihiin, Ma caydda Cabdiraxmaan Cirraa aad kursiga ku fuulaysaa? Ma kala jebinta Beeshaadda baa wax kuu taraysa? Mise Waa siyaasad ku geynaysa halka ay maskaxdu kaa raacday?
(b) Hora weligii ma ka fekeray mucaaridadda laga rabaa waxa ay tahay? Iyo muwaadin sidda loo wejihi karo? Waxa uu Xusbi mucaarid-nimo kuu sheeganaya la gudboon?
(c) Waa maxay aragtidda laga rabo in uu u gudbiyo Ummadda uu foodka ka doonaayo? sidee buuse ugu gudbin karaa?
(d) Waxa uu ka dhaadhi-cinayaa shicibka , ee uu kaga rabo in ay ku doortaan waa maxay?
(e) Ma hayaa siyaasaddii laga rabay ee uu lahaan jirey Xusbi Mucaarid? mise waa maya?
(f) Faysal Zaad wuxuun bay kaga hadhay," Annaa C/Raxmaan Cirro Dalka keenay, oo uu taas u haystaa siyaasad lagu soo raaci karo.
(g) Faysal waxa uu siyaasadda moodayaa qaran jabkiisa, oo waa taas kunka magac loogu bixiyey, welina dabadda buu hayaa, waa in la waydiiyo goorta uu ka waantoo-baayo in uu isagu is karaamo jebiyo?
(h) Faysal Zaad Waa in uu shicibka Reer Somaliland gashadaa, in uu isagu kaga wanaagsan yahay Maamulka, ku salaysan distoorka oo lagu shaqeeyo, Cadaaladda, jiri-taanka Somaliland, isku soo dhawaynta dadka uu askarigu isku fidmayeey, jebinta Muceeshadda, in uu ku dhiqi doono sinaan aanu u kala eexanayn.
(i) Waa in uu ka dheeraaado caydda Reer Hebelka lagu soo soofeeyo iyo Cabdiraxmaan Cirro, haddii kale waa sidaa soo abadda ah, ee tuurta ha isaga sito Ururka Ucid, oo kolba sidda carsaan-yadda, dhinac ha isu maqiiqo, sidaas baa malaha Guriggii Moorgan ee uu askarigu ku hor kaajo, aad ku tegi doon-taaye.
Isku soo duuboo Faysal Zaad, ha loogu dhaarto in aanu mucaarid ahayn, siyaasad-na aanu meesha ku haynin, ee xaalkuu wadaa uu yahay, Xusbiga uu ku magacaaban yahay ku shaqayso, macne kale oo ka dambeeya ma jiro. Mucaaridadu maaha sidaas aad u socdo, lana garan-maayo waxa aad ku sheeganayso mucaarid, mana haysid dariiqii aad u mari lahayd, ee bankii giriyaad baad ka dhex ka jibaadaysaa. Sidaad mooday maaha, ee Caydda Waddani iyo C/Raxmaan Cirro wax ku keeni maysid, kuuna shaqayn mayso, cid kugu jeclaanay-saana waa habeenkii xalay ahaa ee tegay. Mucaaridadda laga rabaa waxa weeye. In uu maamulka ka soo hor jeesto, oo daba galo fartii ay qaadaan-ba, sheego oo fitir-faatir u soo bandhigo ceebta kulmiye. Waa in uu maamulka askarta dalkii kharibay, iyo waxay samaynayaan, uu u soo bandhigo ummadda uu wax ka rabo. Maaha in uu cay qof leeyahay uun kolaba isla soo tagao war-baahinta. Ugu dambayn waxa looga baahan yahay Faysal Zaad, Siyaasad hufan, oo wax ku ool ah, tass oo qaadaa-dhigaysa arimaha dalka ka taagan, fahmana in uu xadhig qaloocan, oo isaga wax uu yeelo mooyee, aan faa'iido u lahayn uu dabadda hayo, taas oo ah wixii uu saddex doorashoo hore meela ku gaadhi waayey. Waxan odhan lahaa ka bax siyaasadda, oo Xusbiga qof macquul ah ku wareeji, sababta oo ah, hadaad is og-tahay sidda laguu haysto iyo fekredda lagaa qabao, shir aad qabato daayo iyo doorsho aad hesho'e, inta aad Xijaab xidhato, baad weji-gaaga dadka ka qarin lahayd, si aan laguu garan, iska soo daa cid aad soo jiidato'e..
N.B Qof Caleen-tiisii Cadaatay, Looma Maaro Helo!